छाड टनिकिक शैम्पू "एस्टेले" सहित कुनै पनि रंगीन शैम्पोले बजारमा ठूलो लोकप्रियताको आनन्द उठाउँछन्। यी उपचारहरूले बाल कपालको कपालको रंग बदल्न सक्दैनन् (उदाहरणको लागि, गोलो रातो रातमा पुन: नामाकरण हुँदैन, र श्यामला गोलो हुने छैन), तर उसलाई प्राकृतिक र एकैचोटि धेरै सुन्दर, नरम र नाजुक छाया दिन्छ। उनीहरूको फाइदाको अर्को पहिलो पहिलो खैरो रंगको रंग लगाउने क्षमता हो। यस्तो उपाय प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, किनकि यो संधै प्याकेजमा लेखिएको छ, कुन कपाल र शैम्पू कसरी काम गर्नेछ, परिणाम हुनेछ। यो यस कारण हो कि यो छाया आधारित शैंपो (बाल्म्स) को उपयोग गर्न को लागी वांछनीय छ, यदि तपाईं उपस्थिति मा ग्लोबल परिवर्तन नहीं चाहते हो, तर कपाल मा सुनहरे या लाल रंग लगते हो ।
यी उत्पादनहरूको बारेमा के हो, उदाहरणका लागि, छाया एस्टेल छाया? सबै भन्दा पहिले, तिनीहरू आफैमा हानिकारक बालों अम्मोनिया र अक्सिडेंटहरूमा हानिकारक छैनन्। यही कारणले गर्दा रंगीन आफैले कपाल घुमाउँदैनन्, परिवर्तन नगर्ने वा यसको ढाँचालाई क्षति पुर्याउँदैन, तर केवल यसको सतहमा रंगीन फिल्म छोड्छ, जसले पूर्ण रूपमा स्नानमा धेरै यात्राको लागि धोएको छ। दोस्रो, छाया शैम्पोको कुनै पनि ब्रान्डको प्यालेट निकै विविध छ। सबैभन्दा लोकप्रिय टोनहरू परम्परागत रूपमा चकलेट, तांबे, सुन, शहद र कारमेल मानिन्छ। तेस्रो, एउटै टिनिंग शैम्पू "एस्टेले", जसको प्यालेट धेरै अमीर छ, प्रभावकारी ढंगले सेतो कपाल रङ (तर, अलस, जब ग्रे सेन्टर 30% भन्दा बढी हुन्छ)।
दुर्भाग्यवश, हामी कुनै पनि toning शैम्पू सम्झना छ , समीक्षा को सबै भन्दा उत्साह हुन सक्छ को बारे मा, आशा दिन र छाया वादा गरेको छैन भने बाल असामान्य रंग छ, र चित्रित। यो प्रक्रिया अप्रत्याशित छ, त्यसैले तपाईंले आफैलाई प्रयोग गर्नु पर्छ र सम्झनुहोस् कुन शैम्पूले अझ सुन्दर र उपयुक्त टोन दिन्छ। यद्यपि, जो कोहीले आफ्नो उपस्थिति थोडा परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता क्षण कहिल्यै बन्द हुँदैन। वैसे, यो उच्च गुणस्तरको व्यावसायिक तयारी को प्रयोग गर्न को लागी राम्रो छ, उदाहरणका लागि, "एस्टेल" शैम्पू को छाया लिन र यसको लागि बाम। शम्पोओस "लोरल", "श्वरस्लोप" होइनन्। विशेष गरी सुन्दर सुन्दर कपालमा छाया लगाउनेछ। उहाँले कर्ललाई उज्ज्वल, रङकारी र बनाउनु पर्छ, बेशक, अधिक स्त्री र आकर्षक।
यो सम्झना हुनुपर्छ कि छाया एस्टेल शैम्पू सहित कुनै पनि रंगीन एजेन्ट को उपयोग गर्न को लागी आसान छ, तर यो धेरै नियमहरु लाई आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला, तपाईंलाई उत्पादनको लागी मात्र बाललाई नमस्कार गर्न को लागी, तिनीहरूलाई पहिलो दबाब पछि। त्यसपछि एक सानो शम्पू (लगभग एक अखरोट संग) ले र सावधानी को पूरा लंबाई मा एक कङ्गन संग फैलिएको छ। निर्देशनहरूमा संकेत गरिएको समयको प्रतीक्षा पछि, तपाईंलाई लगभग तीन मिनेटको कपालको मालिश गर्न आवश्यक छ, तिनीहरूलाई न्यानो पानीको साथमा सफा गर्न आवश्यक छ, र त्यसपछि सबै चीजहरू धो दिनुहोस्। परिणाम बालको बारेमा लगभग तीन हप्तासम्म रहनेछ। यदि परिणामकारी चिकनी, उज्यालो र वर्दी रंग जस्तो छ भने, अर्को पटक तपाईं एकै शैम्पू चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
शैंपू "बोनाकुर" (बोनाउचर) गोरेन्सका लागि: आवेदन, समीक्षाहरू
विन्डोज7को छवि कसरी बनाउने? विन्डोज को मूल छवि 7
मिश्रको सेप्टेम्बर लागि सबै भन्दा राम्रो के छ